Moto C: Tilmaamaha iyo qiimaha xaday | Androidsis
Motorola waa astaan ​​kale oo sanad wanaagsan soo martay. Shirkaddu waxay ku soo bandhigtay suuqa dhowr qalab oo aad u xiiso badan. Sidoo kale, go'aankaaga sharad Telefoonada Android saafi waa wax ka shaqeeya danahaaga, gaar ahaan markay tahay cusbooneysiinta. Bilo kahor, shirkadu waxay shaacisay imaatinka shirkada xadka C.
Maalintoodii waxay yiraahdeen waxay noqon doontaa a jiil qiime jaban iyo qeexitaan wanaagsan. Dhowr bilood ka dib waxaan horeyba u ogaan karnaa taleefanka ugu horreeya ee noocan ah. Waxay ku saabsan tahay Moto C. Marka aan fiirino qeexitaanka telefoonka, waxaan arki karnaa in Motorola uu saxsanaa.
Waa a taleefanka ugu dhameystiran uguna milan. Laakiin taasi sidoo kale way la yaabi doontaa iyada qiimaha la dhimay. Isku-dhafan habboon iyo mid ka mid ah noocyada badankood ay doonayaan inay gaaraan. Waxyaabaha ay Motorola ku gaadhay qalabkan. Maxaan ka filan karnaa Moto C-kan?
Taleefanka ayaa leh 5-inji shaashad leh xallinta 854 x 480 pixels. Jirka taleefanka ayaa ka sameysan polycarbonate gadaashiisana waxaa lagu sameeyay micro-textures. Gudaha, taleefanku wuxuu yeelan doonaa a MediaTek MT6737M 4-core processor. Ka sokow haysashada a Mali-T720 GPU.
RAM-ka loo yaqaan 'Moto C' wuxuu noqon karaa wax aad looga naxo. Maadaama taleefanku leeyahay 1 GB ee RAM. Halka dhanka kaydinta aan ka helno laba nooc oo ah 8 iyo 16 GB. Labadaba waa la ballaarin karaa ilaa 32 GB iyada oo loo marayo microSD. Qeybta sawirada ma ahan inay aad u badan tahay. The camera gadaal waxaa laga keenay 5 MP halka kamarada hore ay tahay 2 MP.
La baytariga Moto C waa 2.350 Mah, sidaa darteed marka la arko qeexitaankiisa waa inay ku filnaataa in qalabka la siiyo ismaamul. Qalabkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa suuqa afar midab (caddaan, dahab, madow iyo casaan). Ugu dambeyntiina, sida nidaamka qalliinka ay u leedahay Android 7.0. Nougat.
Noocyada mooyee, qiimaha taleefanka ayaa la shaaciyey. Haddii faahfaahinta Moto C ay kaa yaabisay, qiimaheeda sidoo kale. Qalabkani wuxuu suuqa ku dhufan doonaa qiimo ku dhow 79 euro. Sideed u aragtaa taleefankan Motorola?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Noocyada Moto C ayaa la muujiyay